Gịnị Ka M Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Obi Dara M Mbà? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Myanmar Norwegian Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ime ihe i kwesịrị ime nwere ike ime ka ị gbakee.
Ọ́ bụrụkwanụ na ọ bụ ihe ị ga-agara ụlọ ọgwụ?
Ihe ị ga-eme
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka
Tụlegodị ihe atụ ndị a:
O nweghịzi ihe na-eme ka obi dị otu nwa agbọghọ aha ya bụ Jennifer mma. Ọ na-ebe ezigbo ákwá kwa ụbọchị n’enweghị ihe kpatara ya. Ọ naghị ekwusara ndị mmadụ okwu, ọ naghịkwa ekwe eri nri. Ihi ụra na-esiri ya ike, uche ya anaghịkwa adị n’ihe ọ bụla ọ na-eme. Ọ nọkata ya echewe sị: ‘Gịnịdị na-eme m? M ka ga-enwetakwa onwe m?’
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Mak bụbu onye e ji ama atụ n’ụlọ akwụkwọ ha. Ma ugbu a, ịga akwụkwọ na-ewe ya iwe, ọ na-ebuzi klas n’isi ma e lewe ule. Ọ naghịzi egwu egwuregwu ndị na-amasịbu ya. Ihe ahụ gbagwojuru ndị enyi ya anya. Ndị mụrụ ya na-echegbukwa onwe ha maka ya. Ò nwere mgbe ọ ga-etofe ihe a, ka ọ̀ bụ otú ọ ga-adịzi?
Ọ̀ na-adịkarị gị otú ahụ ọ dị Jennifer ma ọ bụ Mak? Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ na-adị gị otú ahụ? I nwere ike ime otu n’ime ihe abụọ ndị a:
Gbalịa mee ihe ị ga-emeli n’onwe gị
Kọọrọ ya otu onye toro eto ị tụkwasịrị obi
O nwere ike ịdị gị ka ọ bụ gị mee nke A, karịchaa ma ọ bụrụ na ọ dịghị gị nke ịtụpụrụ mmadụ ọnụ. Mana, ọ̀ bụ ya bụ ihe kacha mma ị ga-eme? Baịbụl sịrị: “Abụọ dị mma karịa otu . . . n’ihi na ọ bụrụ na otu n’ime ha adaa, onye nke ọzọ pụrụ ikulite ibe ya. Ma olee otú ọ ga-adịrị otu onye nke ọ bụ naanị ya, bụ́ onye dara mgbe a na-enweghị onye ọzọ ga-ekulite ya?.”—Ekliziastis 4:9, 10.
Iji maa atụ: Ka e were ya na i furu n’ime obodo ebe ihe ọjọọ na-arị ibe ya elu. Ezigbo chi ejiela, ndị ị na-ahụ ebe niile bụ ndị ị na-amaghị ndị ha bụ. Gịnị ka ị ga-eme? I nwere ike ịsị ka i jiri aka gị chọwa ụzọ. Ma, ọ́ gaghị akara gị mma ịjụ onye i chere na ọ ma ebe ahụ ka o zi gị ụzọ?
Obi ịda mmadụ mbà dị ka onye nọ ụdị ebe ahụ ihe ọjọọ na-arị ibe ya elu. Ọ bụ eziokwu na e nwere mgbe obi nwere ike ịjọ gị njọ. Mana, ọ bụrụ na obi ajọọ gị njọ ruo ogologo oge, i kwesịrị ịgwa onye ị ma na ọ ga-enyere gị aka.
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Onye na-akpa iche . . . ọ bụ ezi amamihe niile ka ọ ga-agbaso mgba.”—Ilu 18:1.
Ihe mere ime nke B ji baa uru, nke bụ ịgwa nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụkwanụ okenye ọ bụla ị tụkwasịrị obi, bụ na i nwere ike ịmụta ihe n’aka onye ụdị ihe ahụ merela.
I nwere ike ịsị: ‘Echeghị m na nne m na nna m ma otú ọ na-adị ma obi daa mmadụ mbà.’ Mana, ị gaghị ama ma ọ bụrụ na ị gwaghị ha. Ọ bụrụgodị na ọ bụghị otu ihe ahụ na-eme gị mere ha mgbe ha bụ ọgbọ gị, o nwekwara ike ịbụ na e nwere mgbe obi dị ha otú ọ dị gị ugbu a. Ha nwekwara ike ịgwa gị ihe ị ga-eme ga-enyere gị aka.
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Ọ̀ bụ na amamihe adịghị n’etiti ndị agadi, ọ̀ bụ na nghọta adịghịkwa n’ogologo ndụ?”—Job 12:12.
Ihe bụ isiokwu: Ọ bụrụ na ị gwa nne ma ọ bụ nna gị, ma ọ bụkwanụ okenye ọ bụla ị tụkwasịrị obi ihe na-enye gị nsogbu, o nwere ike ịgwa gị ihe ị ga-eme ga-enyere gị aka.
Obi ịda mmadụ mbà dị ka mmadụ ifu ụzọ n’ebe ihe ọjọọ na-arị ibe ya elu. Ihe ga-enyere gị aka bụ ịgwa ndị ọzọ ka ha zi gị ụzọ
Ọ bụrụ na obi na-ajọ gị njọ kwa ụbọchị, o nwere ike ịbụ na e nwere nsogbu i nwere kwesịrị ka dọkịta lebara ya anya. O nwere ike ịbụ obi ịda mbà.
Onye na-eto eto nwere ike iche na o nweghị ihe o mere ma obi na-ajọ ya njọ mgbe ụfọdụ, mana o nwere ike iji nwayọọ nwayọọ ghọọ nnukwu nsogbu. N’ihi ya, ọ bụrụ na ọ na-eme gị mgbe niile, na-akwụsịghị akwụsị, i nwere ike ịgwa nne na nna gị ka ị gaa ụlọ ọgwụ.
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Mkpa ọgwọ ọrịa adịghị ndị ahụ́ dị mma, kama mkpa ya dị ndị ahụ́ na-enye nsogbu.”—Matiu 9:12.
Ihere ekwesịghị ime gị ma ọ bụrụ na ndị dọkịta asị na ịda mbà n’obi nke gị akala njọ, n’ihi na ọtụtụ ndị na-eto eto na-ada mbà n’obi, e nwekwara ike ịgwọta ya. Enyi hụrụ gị n’anya agaghị eledawa gị anya maka ya.
Ihe Ga-enyere Gị aka: Nwee ndidi. Ọ na-ewe oge tupu onye dara mbà n’obi enweta onwe ya. Burukwa n’obi na e nwere ụbọchị ndị ọ ga-aka mma nweekwa ụbọchị ndị ọ ga-aka njọ. *
Ọ bụrụgodị na ị ga-agara ya ụlọ ọgwụ, a ka nwere ihe ndị i nwere ike ime ka obi ghara ịna-ajọ gị njọ. Dị ka ihe atụ, imega ahụ́ mgbe niile, iri nri na-edozi ahụ́ na ihi ezigbo ụra, nwere ike inye aka mee ka obi ghara ịna-ajọ gị njọ mgbe niile. (Ekliziastis 4:6; 1 Timoti 4:8) Ihe ọzọ nwekwara ike inyere gị aka bụ inwe akwụkwọ ebe ị na-edetu otu obi dị gị, ihe ndị ị chọrọ ime ga-enyere gị aka, ihe ndị na-eme ka o siere gị ike ime ha nakwa ndị nke i metara.
Ma obi ọ̀ na-ajọkarị gị njọ, ma ọ bụ na obi adịghị gị mma n’ihi nsogbu gị na ya na-alụ, cheta na ọ bụrụ na ị gwa ndị ọzọ ka ha nyere gị aka, meekwa ihe ndị i kwesịrị ime, obi nwere ike ịkwụsị ịna-ajọ gị njọ.
Amaokwu Baịbụl ndị ga-enyere gị aka
“Jehova nọ ndị obi ha tiwara etiwa nso; ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.”—Abụ Ọma 34:18.
“Tụkwasị Jehova ibu arọ gị, ya onwe ya ga-akwadokwa gị. Ọ dịghị mgbe ọ ga-ekwe ka onye ezi omume maa jijiji.”—Abụ Ọma 55:22.
“Mụ onwe m, bụ́ Jehova Chineke gị, sekpụ gị n’aka nri gị. Ọ bụ m bụ Onye na-asị gị, ‘Atụla egwu. Mụ onwe m ga-enyere gị aka.’”—Aịzaya 41:13.
“Unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla maka echi.”—Matiu 6:34.
“Mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ; udo nke Chineke nke karịrị echiche niile ga-eche obi unu . . . nche.”—Ndị Filipaị 4:6, 7.
^ Mgbe ọ bụla ọ batara gị n’obi ka i gbuo onwe gị, kọọrọ ya okenye ị tụkwasịrị obi n’egbughị oge. Ị chọọ ịmatakwu gbasara ya gụọ isiokwu bụ́ “Ànọ M Ndụ Eme Gịnị?” dị na Teta! Eprel 2014.
Ahụ́ Ike Udo na Obi ụtọ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị Ndị Na-eto Eto
AKWỤKWỌ Ị GA-EJI EDETU IHE
Gịnị Ga-enyere Gị Aka ma Obi Jọwa Gị Njọ?
Isiokwu A Nwekwara Ike Ịmasị Gị
Gịnị mere mmadụ ga-eji na-ekwu na ọnwụ kaara ya mma?
Gịnị Mere Ndị Na-eto Eto Ji Ada Mbà? Gịnị Ga-enyere Ha Aka?
Gụọ ihe a ka ị mata ihe ndị e ji ama na ọ na-achọ ime mmadụ, nakwa ihe ndị nwere ike ịna-akpata ya. Ị ga-ahụkwa ihe ndị nne na nna na ndị ọzọ nwere ike ime iji nye aka.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Obi Dara M Mbà?
ijwyp isiokwu 65